ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ အထ္ထုပ္ပတ္တိ အကျဉ်း နှင့် ရရှိခဲ့သော ဆုများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ အထ္ထုပ္ပတ္တိ အကျဉ်း နှင့် ရရှိခဲ့သော ဆုများ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ အထ္ထုပ္ပတ္တိ အကျဉ်း နှင့် ရရှိခဲ့သော ဆုများ
Posted by ဇီဇီ on Jun 19, 2013 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Facebook, History, My Dear Diary | 14 comments
ကိုထွန်းဝေ ရဲ့ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြုစုထားတဲ့ မှတ်တမ်းလေးရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ အထ္ထုပ္ပတ္တိ အကျဉ်း
မြန်မာ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ တတိယမြောက် သမီးဖြစ်ကာ သူမ၏ အမည်ပါ အောင်ဆန်းဆိုသော စကားလုံးသည် သူမ၏ ဖခင်အမည်ကို ယူထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကြည်ဆိုသော စကားလုံးသည် သူမ၏ မိခင် ဒေါ်ခင်ကြည်၏ အမည်မှ ရယူကာ စု ဆိုသော စကားလုံးသည် သူမ၏ အဖွားဖြစ်သူ၏ အမည်မှ ယူထားခြင်းဖြစ်သည်။
သူမသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်မှု အတွက် ဆာခါရော့ဗ်ဆု၊ ၁၉၉၁ ခုနှစ် အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု နှင့် ရဖ်တို ဆုများ ရရှိခဲ့သည်။ အာဏာရှင် စနစ်အောက်တွင် ငြိမ်းချမ်းသော၊ အကြမ်းမဖက်သော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု အတွက် အိန္ဒိယ အစိုးရက ချီးမြှင့်သော ဂျဝါဟာလာနေရူးဆုကိုလည်း လက်ခံ ရရှိခဲ့သည်။
သူမသည် အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ် စိန့်ဟူးခ်ျကောလိပ်တွင် ဆက်လက် ပညာဆည်းပူးခဲ့ပြီး၊ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် ဒဿနိကဗေဒ၊ နိုင်ငံရေးပညာနှင့် စီပွားရေးပညာ အထူးပြုတို့ဖြင့် ဒီကရီ ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၇၂ တွက် ဘူတန်ယဉ်ကျေးမှုလေ့လာရေး စကောလာ ဒေါက်တာ မိုက်ကယ်အဲရစ်နှင့် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့သည်။ နောက်နှစ်တွင် သူမ၏ သားအကြီးဖြစ်သူ အလက်ဇန္ဒား(ခ)မြင့်ဆန်းအောင်ကို လန်ဒန်တွင် ဖွားမြင်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၇ တွင် ဒုတိယသားဖြစ်သူ ကင်မ်(ခ) ထိန်လင်းကို မွေးဖွားခဲ့သည်။
ဒေါ်စုသည် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ခဏတာ နေထိုင်ခဲ့သောလည်း၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး မကြာခင်တွင်၊ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချခံခဲ့ရသည်..
၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်စုသည် ရန်ကုန်မြို့မှ ထွက်ခွာရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း၊ စစ်အစိုးရမှ သူ့အား နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ပြန်လည်ချထားခဲ့သည်…
၁၉၈၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၈ရက်နေ့(နောင်တွင် ၈လေးလုံး အရေးအခင်း အဖြစ် လူသိများသည်။) တွင် ဖြစ်ပွားသော ဆန္ဒပြ လှုပ်ရှားမှုများကို အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းခဲ့သည်။ ယင်းနောက်တွင် စစ်အစိုးရမှ အာဏာသိမ်းခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ ဂန်ဘာရီသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၆ရက်ကြာခရီးသွားရောက်ခဲ့သည်။ သူသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့အားလုံး နှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းမည်ဟု ဆိုသော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်မရရှိခဲ့သလို၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်လည်း တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ…
စဉ်) ဆုအမည် (ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း) /ရသည့်ခုနှစ်
၁) Honorary Fellow St Hugh’s College (Oxford, UK) /၁၉၉၀
၂) သိုးရော်ဖ် ရဖ်တို အထိမ်းအမှတ် ဆု Human Rights (နော်ဝေ) /၁၉၉၀
၃) ဆာခါရော့ဗ်ဆု Freedom of Thought (European Parliament) /၁၉၉၁
၄) နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆု Oslo, (နော်ဝေ) /၁၉၉၁
၅) Honorary Member International PEN (Norwegian Center) /၁၉၉၁
၆) Humanities Human Rights Award (USA) /၁၉၉၁
၇) Honorary Member International PEN (Candian Center) /၁၉၉၁
၈) Marisa Bellisario Price အီတလီ /၁၉၉၂
၉) Annual Award of the international Human Rights ဥပဒေအဖွဲ့ (အမေရိကန်) /၁၉၉၂
၁၀) Honorary President Students’ Union London School of Economics and Political Science (UK)/ ၁၉၉၂
၁၁) Honorary Member International PEN (English Centre) /၁၉၉၂
၁၂) Honrary Life Member University of London Union (UK) /၁၉၉၂
၁၃) Honorary Professional Fellowship Law and Society Trust (Sri Lanka) /၁၉၉၂
၁၄) Honorary Doctorate in Political Science Thammasat University (Thailand) /၁၉၉၂
၁၅) International Simon Bolivar prize UNESCO /၁၉၉၂
၁၆) Prix Litteraire des Droits de l’Homme Nouveaux Droits de l’Homme, France /၁၉၉၂
၁၇) Honorary Member World Commission on Culture and Development (UNESCO) /၁၉၉၂
၁၈) Member Academie Universelle des Cultures (Paris) /၁၉၉၃
၁၉) Rose Prize arbejderbevaegelsens Internationale Forum/International Forum of the Danish Labour Movement, Copenhagen /၁၉၉၃
၂၀) Victor Jara International Human Rights Center for Human Rights and Constitutional Law, Los Angeles, USA /၁၉၉၃
၂၁) Member of the Advisory Board Francois-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, Harvard University /၁၉၉၃
၂၂) Honorary Doctorate of Law University of Toronto (Canada) /၁၉၉၃
၂၃) The Freedom of the City Commune of Giugliano, Italy /၁၉၉၃
၂၄) Bremen Solidarity City of Bremen, Germany /၁၉၉၃
၂၅) Premio Mujer Progresista (Federacion Mujeres Progresistas / Spanish Federation of Progressive Women, Madrid) /၁၉၉၃
၂၆) Honorary Doctorate Philosophy & Letters, Free University of Brussels, Belgian /၁၉၉၄
၂၇) Honorary Adviser Forum of Democratic Leaders in the Asia-Pacific /၁၉၉၄
၂၈) The Freedom of the City Aversa, Italy /၁၉၉၅
၂၉) Liberal International Prize for Freedom Britanints Liberal Democracy Party, UK /၁၉၉၅
၃၀) Honorary Doctorate of Laws Queen’s University, Canada /၁၉၉၅
၃၁) Jawaharlal Nehru Award for International Understanding (for 1993) India /၁၉၉၅
၃၂) Gandhi Award Simon Fraser University, Canada /၁၉၉၅
၃၃) Honorary Doctorate of Civil Law University of Oxford /၁၉၉၅
၃၄) IRC Freedom Award International Rescue Committee /၁၉၉၅
၃၅) Companion of the Order of Australia Australia /၁၉၉၆
၃၆) Liberal International Prize (UK) /၁၉၉၆
၃၇) Asia Human Rights of Law (Japan) /၁၉၉၆
၃၈) W.Averell Harrimen Democracy Award National Democratic Institute U.S.A /၁၉၉၆
၃၉) Rajiv Shmirti Parashka (Rajiv Gandhi Memorial Award) India /၁၉၉၆
၄၀) Empty Chair Award Women of the Year Lunch, London, UK /၁၉၉၆
၄၁) Honorary Doctorate of Law Charles University in Prague, Czeeh Republic /၁၉၉၇
၄၂) Honorary Doctorate of Letters Sydney University of Technology, Australia /၁၉၉၇
၄၃) Honorary Doctorate of Letters California Chapman University, U.S.A /၁၉၉၇
၄၄) Honorary Doctorate of Law Natal University, South Africa /၁၉၉၇
၄၅) Honorary Doctorate of Law America University, Washington D.C, U.S.A /၁၉၉၇
၄၆) Distinguished Alumni Award Central University / Delhi University /၁၉၉၇
၄၇) Honorary Citizenship of Rome (Italy) (May 23,1997) /၁၉၉၇
၄၈) Honorary Doctorate of Letters Glasgow University (UK) /၁၉၉၇
၄၉) Pearl S. Buck Woman’s Award Pearl S. Buck Foundation (USA) /၁၉၉၇
၅၀) International Award St. Angela’s Peace and Justice Group, Waterford (Eire) /၁၉၉၇
၅၁) Profiles in Courage Award Kennedy Society of Denmark /၁၉၉၇
၅၂) Honorary Doctorate Cambridge University (June 1998) /၁၉၉၈
၅၃) Freedom of the City (Oxford, UK) /၁၉၉၈
၅၄) Honorary Doctorate of Laws University of Wales, Cardiff /၁၉၉၈
၅၅) Honorary Doctorate of Laws University of Bristol (UK) /၁၉၉၈
၅၆) Honorary Doctorate of Laws University of Melbourne (Australia) /၁၉၉၈
၅၇) Honorary degree Université catholique de Louvain, Belgium – December /၁၉၉၈
၅၈) Honorary Degree University of Bath (UK) – December /၁၉၉၈
၅၉) Honorary Degree Bucknell University – May /၁၉၉၉
၆၀) Freedom Award International Republican Institute, USA (October 1999) /၁၉၉၉
၆၁) The Freedom of the City of Dublin Award Ireland (November 1999) /၁၉၉၉
၆၂) 2000 CAW Nelson Mandela Human Rights Award Canada (December 2000) /၂၀၀၀
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ သတ္တိများဟာ အာရှ နိုင်ငံများမှ အထူးအံ့သြဖွယ်၊ ချီးကျူး သင့်သည့် ဥပမာများမှ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ရန် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ အဓိက အရေးပါတဲ့ ပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ် ..
ယခု ၁၉၉၁ ခုနှစ် နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု အား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချီးမြင့်ရင်း၊ ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူအခွင့်အရေးအများ ရကြရန် ငြိမ်းချမ်းစွာ တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည့် သူများအား ထောက်ခံ အားပေးရန် နှင့် သူမ၏ အလံမချ ငြိမ်းချမ်းရေး တိုက်ပွဲဝင်မှုများကြောင့်၊ နော်ဝေနိုင်ငံ နိုဘယ် ကော်မီတီမှ ဤဆုအား ချီးမြှင့်လိုက်သည်။
အော်စလို, အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၁၉၉၁
၁၉၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်၊ နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ၉ ဦးဖြစ်သည့် …
Jody Williams တို့မှ
မြန်မာပြည်အား အုပ်ချုပ်နေသည့် သူများအား “ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အခြားသော တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ အရေးပါသော နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများ မချန် စစ်မှန်သော လက်တွေ့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် နှင့် စစ်မှန်သော တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွှတ်ရေး များ ဖြစ်စေရန် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှ ကြားဖြတ် ဖြေရှင်းပေးရန်” ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
အပိုင်း ၂ ဆက်ရန်….
အမေ သားက အမေ့သားပါ
အမေ့ သားကိုလေ ဘုရားသား အနိုင်ကျင့်နေတယ်အမေ။ တားပေးဘာ။
အမေ့သားနဲ့ ရေရှုသမီး ရည်ငံမှာကို ဘုရားသားက ကန့်လန့်တိုက်နေတယ်အမေ
ခလုပ်ထိမှ အမိတ-တာ မဟုတ်ပါဘူးအမေ
သားကလေ သူ့ကို သူ့အဖေ ဘုရားမျက်နှာထောက်ပြီး ကုန်းကုန်းပြီးကန်တော့နေတာပါ အမေ
အဲ့ဒါသူက မကျေနပ်နိုင်ဘဲ အလေးပါအပြုခံချင်နေပြီ အမေ
သမိုင်းပြန်လှန်ဖတ်ရင်း… ခေတ်ပြောင်း/အယူပြောင်း.. ဖြစ်စေတဲ့..ဘုရားသားတွေရဲ့.. စကားကြီး၂ခွန်းသတိထားမိတယ်..
တခုက.. ကနောင်မင်းရေမြုတ်ဗုံးစမ်းတော့… သတ္တ၀ါတွေသေကြေပျက်စီးတယ်ဆိုပြီးမင်းတုန်းမင်းကို ပြောလိုက်တဲ့စကား…
မြဲနိုင်ပေ့ သူတို့ ကိုယ် ၊ မျိုရက်ပေ့ သူ့ ခံတွင်း
ဒို့ . လုပ်သည့် ထမင်းကို ၊ဒို့ ဟင်းလျာ အသားနှင့်
စားကြသည့် ဖြစ်နဲကို ၊ ဒို့ အသဲနာလိုက်ကဲ့…… ဆိုတဲ့..လေးချိုးကြီးထဲကစာတွေ..
မြန်မာတွေအခုဆက်ရေးနေကြတဲ့သမိုင်းမှာ.. ဒီနှစ်ပိုင်းထဲ.. ပြည်ဖျက်စကားကြီးတခုခုလာပါဦးမယ်..
ဒါကို.. နောင်အနှစ်၅၀.. ၁၀၀ လောက်မှ.. နားလည်မြင်ကြရလ်ိမ့်မယ်..။
ပထမတခွန်းကတော့ တကယ် အသဲနာတာပါ…..
သေသေချာချာ ပြန်စဉ်းစားတော့လည်း ဘုန်ကြီးက သူ့ ဘက်က မှန်နေတာပဲ……
သို့ ပေသိ ဘုန်းကြီးကို ဘုန်းကြီး နေရာမထားပဲ… ဆရာတပါးလို နိုင်ငံရေးမှာ စကားနားထောင် လိုက်တဲ့ မင်းတုန်းမင်းက ပိုမှားတယ်လို့ဆိုချင်တယ်…….
အခုလည်း အဲ့အတိုင်းပါပဲ…. ဘုန်းကြီး စကား သူ့ ဘာသူမှန်နေတာတောင် မှားအောင် ယူသုံးလိုက်ကြသေးရင်…. ဘုန်းကြီး စကား အမှားများရှိခဲ့လို့ယူသုံးလိုက်ကြလို့ ကတော့…….
မတွေးရဲစရာ………… ဘုန်းကြီးကို ဘာသာရေးကလွဲလို့မလုပ်ရလို့ဥပဒေ ထုတ်ရမယ့်ပုံပေါက်နေပီ…….. ခက်တာက အဲ့လို ထုတ်လည်း ဘုန်ကြီးစကား နားထောင်တဲ့ သူက ရှိသေး……………………………………………………….
လူပ်ရှားပါဝင်မူ့ ရပ်တည်မူ့ ဆောင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အမှတ်တယ အဖြစ်ရှယ်ပေးတာ ကျေးကျေးပါ ကေဇက်ရေ..
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၈နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်လိုက်သော “မေတ္တာရိပ်” Page ကလေး မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရေးတဲ့ ဒီစကား ဆောင်းပါးတွေ တင်ထားတယ်။
ဖတ်ချင်သူတွေ ဖတ်နိုင်ဖို့ လင့်ခ်လေး ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ်တော်တို့လုပ်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းခလေးတွေ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့…
“စားပြီးနားမလည် ဝါးပြီးထွေးထုတ် ပီကယ်ဘွ”ကို ရောက်တော့မှာ…
အိုဘယ့်… မယ်မယ်ဖျာ့… မွေးနေ့မှာတောင်းဆိုပါရစေ…
လွှတ်တော်ထဲမှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ကတုံးမဖြစ်ဖို့အရေး ဥပဒေပြုပေးပါလားလို့…
အထ္ထုပ္ပတ္တိထဲမှာ နောက်ထပ် ဆုတစ်ခု တိုးပေးချင်လို့ပါ…
CQ test တွေ ဖြေရဦးမလား:::
အရင်ဆုံး ဖေ့ဘုတ်မှာ မရှယ်ခင် အဲဒီ တက်(စ) လေးတွေနဲ့ စစ်ချလိုက်ရင်ကို ပြဿနာ အတော်သက်သာသွားမယ်။..
ဒေါ်စုဘာလဲ သေချာမသိတဲ့ ကလေးများအတွက် ဆွိရဲ့စာက ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ဖြေပေးထားပါတယ်…
သိသင့် သိထိုက်တဲ့ အချက်တွေ တင်ပြ ပေးလို့ ..
နောက်ဆုံးရတဲ့ ဘွဲ့ကတော့ တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီကပေးတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် မြန်ကျင့်ဒေသ ပါတီအကြီးအကဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား… :harr:
ဗကပရဲ့.. NLDကိုဝိုင်းရံကြ…. .ရုတ်သိမ်းလိုက်ကတည်းက.. ကိုရင်ကြောင်ကြီးလည်း.. ဒေါ်စုကိုစိတ်ကွေးတော့တာပဲကိုး…
ဒီလို အချက်တွေစုမြင် မှ ဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လို တစ်ယောက် ပေါ်လာဖို့လမ်း ကိုယ့်တစ်သက် မတော့ မရှိနိုင်တော့ ဆိုတာ ပိုပြီး သေချာသွားတယ်။
ကျေးဇူးပါ ဇကားလက် ထက်လှ တဲ့ ညို့မျက်ဝန်း ရေ့။